हिमालयन मल्टिपल कलेज गएका नेकपा नेता भण्डारी वेपत्ता, २४ घण्टासम्म पनि अवस्था अज्ञात
५ पुस, झापा । नेकपाका मेचीनगर नेता दीपक भण्डारी हिजो बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी शुरु भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको मेचीनगर अध्यक्ष, धुलावारी जेसिसका पूर्वअध्यक्ष, हिमालयन मल्टिपल कलेजका निर्देशकलगायत थुपै्र
कांग्रेस पदाधिकारी विवाद अझै मिलेन, चन्दाले नधान्ने भएपछि भोलिबाट सानेपामा बैठक
४ पुस, काठमाडाैँ । नेपाली काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे सहमति हुन नसक्दा जारी महासमिति बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन । पदाधिकारीको विवादले महासमिति बैठकमा
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको अन्त्यष्टि आज, गिरीकै इच्छा अनुसार सलामी अर्पण नहुने
४ पुस, काठमाडाैँ । ९३ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको आज अन्त्यष्टि गरिने भएको छ । परिवारले बताए अनुसार पशुपतिस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा ३ बजे अन्त्येष्टि गरिने तयारी रहेको
कर्मचारीको तलबभत्ता पनि अाफैँ बुझ्छन सभामुख महरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिना
४ पुस, काठमाडाैँ । संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदले आफ्ना स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता आफैँले बुझ्ने गरेको पाइएको छ । नियम विपरित कर्मचारीको तलबभत्ता सबैभन्दा बढी बुझ्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा
सङ्घीयता कार्यान्वयनका बाँकी कार्य पूरा गर्ने बाटो खुल्यो, पुस मसान्तभित्र वित्त आयोग गठन गरिने
३ पुस, काठमाडाैँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना पारित भएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनका बाँकी कार्य पूरा गर्ने बाटो खुलेको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने बाँकी कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएपछि
नेपाली कांग्रेसमा अब कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्वाचन हुने
३ पुस, काठमाडाैँ । नेपाली काङ्ग्रेसले लामो रस्साकस्सीपछि विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे विवाद टुङ्गो लगाएको छ । आज साँझ पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले
नेकपाका सांसद बिरोध खतिवडा पनि बने घरभाडा बिरोधी, खातामा अाएको पैसा फिर्ता गर्ने
३ पुस, काठमाडाैँ । काठमाडाैँमा घर हुँदाहुँदै घरभाडा लिएर भ्रष्टाचार गर्ने नेकपाका अर्का सांसद बिरोध खतिवडाले पनि अाफूले घरभाडा बापतको रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन । संसदीय अभ्यासमा छुट्टै पहिचान
संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन पुस ११ बाट सुरू हुने
३ पुस, काठमाडाैँ । संघीय संसदको बैठक बोलाइएकत्र छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिँउदे अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । अधिवेशन ११ पुस दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी राष्ट्रपति भण्डारीले
नेपाली कांग्रेस बैठकमा अर्को रमिता, देउवाले बोल्दाबोल्दै माइक काटियो (हेर्नुहोस् भिडियो)
३ पुस, काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा अनेक रमिता चलिरहेको छ । बिधानको विषयमा यति लामो छलफल भएर पनि बैठकमै पेश हुन नसकेपछि नेताहरूबीच अहिलेसम्म बाझाबाझ र माइक खोसाखोसमात्र
देउवाले हलीलाई झैँ हप्काएका प्रकाशशरणले जगदिश्वरनरसिंह केसीको माइक किन खोसे ?
३ पुस, काठमाडौँ । कांग्रेस महासमिति बैठकमा नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसी र सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतबिच हात हालाहाल भएकाे छ । कांग्रेस महासमिति बैठकमा विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्न
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकः अाज ८ जनाले धारणा राखे, भीम रावलको ३४ बुँदे लिखित सुझाव
३ पुस, काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा मंगलबार ८ जना सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि स्थायी
काँग्रेस महासमिति बैठकमा केसी र महतबिच हात हालाहाल, बैठक स्थगित
३ पुस, काठमाडौँ । काँग्रेस महासमिति बैठकमा डा प्रकाशशरण महत र जगदिश्वरनरसिंह केसीबीच हात हालाहाल भएकाे छ । काँग्रेस महासमिति बैठकमा विधान मस्यौदा प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्न ढिला भएपछि महासमिति